Ahịa akpa ịchọ mma nke Guangzhou na-etolite ngwa ngwa, ihe a na-achọkwa na-abawanye. Ọganihu nke ụkpụrụ ndụ, ime obodo na ịrị elu nke ụlọ ọrụ ịchọ mma akwalitela mmepe na-aga n'ihu nke ahịa akpa ịchọ mma Guangzhou. Site na ịrị elu nke oriri ahaziri onwe ya, ahịa akpa ịchọ mma ahụ ahụwokwa oke nke nhazi ahaziri onwe ya. Mkpa ahaziri onwe ya aghọwo ihe ejiji, nanhazi akpa ịchọ mma ejirila njirimara ya dị iche iche were nke nta nke nta nweta ihu ọma ndị mmadụ.
Nhazi mmepụta akpa ịchọ mma Guangzhou, Ịchọ ndị ọkachamara na ndị na-emepụta ihe mgbe niile bụ isi ihe! Obodo m bụ obodo kachasị na-emepụta akpa. A na-eme atụmatụ n'ụzọ nchekwa na enwere opekata mpe karịa ndị na-emepụta akpa 10,000 na mba ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta akpa ọ bụla nwere ike ịnye ọrụ nhazi akpa ịchọ mma, mana ọnụ ọgụgụ mmepụta, njirimara ngwaahịa na ọkwa teknụzụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla dị iche. N'agbanyeghị nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ mmepụta akpa, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-emepụta obere ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na ngwaahịa dị mma, ị ga-aṅa ntị na ntozu mmepụta nke onye nrụpụta.
Ugbu a bụ oge ozi ịntanetị, n'agbanyeghị nsogbu ọ bụ, m ga-achọta ozi m chọrọ site na ịntanetị. N'oge a, nnukwu na oberendị na-emepụta akpana-eji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe, na-amalite ịmụta ụdị azụmahịa ịntanetị + O2O, ma gosipụta ngwaahịa na ọrụ ha site na nyiwe e-azụmahịa. Agbanyeghị, enwere njupụta nke mgbasa ozi ugbu a, na nkwalite ozi dị ntakịrị chaotic. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ onye nrụpụta, ị ghaghị ịmụta ịnakọta ezi ozi nke onye nrụpụta, dị ka oge nhazi, ọnụ ọgụgụ mmepụta ihe, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ, akwụkwọ ozi, wdg, iji mee nhọrọ ziri ezi site na ntụnyere!
Akpa ịchọ mma omenala Guangzhou, chọọ Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Guangzhou Tongxing Packaging Products Co., Ltd.Dị ka benchmark ụlọ ọrụ na ịchọ mma akpa customization ụlọ ọrụ na Guangzhou, Tongxing anọwo na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, imewe na mmepụta nke ịchọ mma akpa, na-agba mbọ inye bara uru akpa customization akpa. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe, Guangzhou Tongxing Packaging Products Co., Ltd. eguzobewo a zuru ezu ngwaahịa nnyocha na mmepe usoro na àgwà akara usoro, na aghọwo a soplaya nke akpa ngwaahịa maka n'elu 500 ụlọ ọrụ. Ọ nwere aha ọma na ntụkwasị obi!
Oge nzipu: Dec-07-2021